I-PipeWire 0.3.3 ifika ngoPhuculo lweNkxaso, iiFixes, kunye nokunye | Ubunlog
Ubumnyama | 14/09/2021 15:57 | Ukuhlaziywa ukuba 14/09/2021 22:58 | software
Inguqulelo entsha yePipeWire 0.3.3 eyiphuhlisayo sele ikhutshiwe iseva yemultimedia yesizukulwana esitsha, eya kuthatha indawo yePulseAudio. UmbhobhoWeld Yandisa amandla ePulseAudio Ngevidiyo esasazwayo, ukuqhubekeka kwesandi esisezantsi, kunye nemodeli yokhuseleko entsha yokusasaza kunye nolawulo lokufikelela kwesixhobo.
IPipeWire yandisa ukufikelela kwePulseAudio ngokuqhubekeka nayiphi na imithombo yeendaba kwaye iyakwazi ukuxuba kunye nokuhambisa kwakhona imilambo nevidiyo. IPipeWire ikwabonelela ngesakhono sokulawula imithombo yevidiyo ezinje ngezixhobo zokubamba ividiyo, iikhamera zewebhu, okanye ukukhutshwa kwescreen kwizicelo.
Umbhobho wamanzi inokwenza njengeseva yesandi esezantsi ngokusebenza ngokudibanisa ukubanakho kwePulseAudio kunye neJACK, nditsho neemfuno zeenkqubo zokulungisa izandi ezingenako ukubanga iPulseAudio.
Kwakhona, IPipeWire ibonelela ngemodeli yokhuseleko ephuculweyo Inika amandla ulawulo olwahlukileyo lokufikelela ngokukodwa kwisixhobo kwaye iququzelele ukuhanjiswa kwesandi nevidiyo ukuya nokusuka kwizikhongozeli ezizimeleyo. Enye yeenjongo eziphambili kukuxhasa usetyenziso oluzimeleyo kwifomathi yePlppak kwaye usebenze kwi-Wayland esekwe kwimizobo.
1 IPipeWire 0.3.35 Iimpawu ezintsha eziphambili
2 Uyifaka njani iPipeWire kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
IPipeWire 0.3.35 Iimpawu ezintsha eziphambili
Kule nguqulo intsha ibonisiweyo yePipeWire 0.3.35 sinokuyifumana loo nto ukongezwa kwenkxaso ye-S / PDIF yokuhanjiswa kweprotocol (into ebaluleke kakhulu kule mihla), inoxanduva lokuhambisa iaudiyo yedijithali ngezihlanganisi ze-optical kunye ne-HDMI.
Enye into entsha ebonakalayo ngumsebenzi owenziweyo kwisicelo I-Skype yeLinux ngokongeza ikhonkco enyanzela ukusetyenziswa kwefomathi ye-S16 xa ugqithisa ulwazi malunga nokufakwa kwesandi kunye nezixhobo zokuphuma. Olu tshintsho lusombulule umba obangele ukuba umntu obhalisileyo angavelisi iaudio kwelinye icala lonxibelelwano.
Kwelinye icala yongeze ujongano olutsha ukulayisha iimodyuli, oku kuvumela iiplagi ukuba zisebenzise olu nxibelelwano ukuze zithumele isicelo sokukhuphela iiplagi ze-spa, kunye nobungakanani beparameter buffer inyuswe, ngaphambili ibingakwazi ukulungiselela zonke iipropathi zeendawo ezinenani elikhulu lezitishi.
Olunye utshintsho emi kule nguqulo intsha yePipeWire 0.3.3:
IiCodecs zeBluetooth zibekwe kwiiplagi ezihlukeneyo ezilayishwe ngamandla.
Inani lezilungiso ezibalulekileyo ezinxulumene nokuhambelana kwe-MIDI.
Inani leefomathi zomsindo ezikhoyo zokuxuba landisiwe.
Ukubonelela ngokusebenza komqhubi ngokufaka uqhagamshelo lwe-loopback.
Iseva iphumeze isixhobo sokubuyisela ulwandiso, esikuvumela ukuba uqwalasele iikhowudi
IEC958 (S / PDIF) iyahambelana nesixhobo sokuphuma kwesandi kusetyenziswa isixhobo se-pavucontrol.
Iplagi ye-convolver kwikhonkco lokucoca ulungiselelwe ngakumbi.
Ukupheliswa kokulandelwa kwepropathi ngokulandelelana kwe-Echo kuphuculwe
Ukuphuculwa kokuhambelana kwecatia kunye necarla ngokugcina izinto
IJack port ngoku inika ingxelo ngokuchanekileyo
Gqibela ukuba unomdla wokwazi ngakumbi malunga nayo, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani iPipeWire kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo banomdla wokufaka iPipeWire kwiinkqubo zabo, kufuneka bazi ukuba ibandakanyiwe ngaphakathi koovimba bobuntu, kodwa okwangoku kuphela luhlobo 0.2.7 kunye nohlobo olukhoyo le nguqulo intsha ayikabandakanywa, ke kuya kufuneka balinde iintsuku ezimbalwa ukuze kwenzeke oku.
Ukufakwa kwindawo yokugcina izinto ukunye nayo lo myalelo ulandelayo:
Ngelixa, kwabo bakhetha ukufaka le nguqulo intsha ngoku, kuya kufuneka benze ikhowudi kwindlela yakho.
Ngale nto kufuneka siyikhuphele kunye:
Kwaye siqhubeka ukuqokelela kunye nokufaka kunye:
Ungavavanya iPipeWire ngalo myalelo ulandelayo:
Okokugqibela, ungajonga kumaxwebhu kunye nolunye ulwazi ku eli khonkco lilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » IPipeWire 0.3.3 ifika ngoPhuculo lweNkxaso, iiFixes, kunye nokunye